Ungakuvula Kanjani Ukulandelela Okuzenzakalelayo kwe-Google Analytics UTM ku-Salesforce Marketing Cloud | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 17, 2022 NgoLwesithathu, Februwari 23, 2022 Douglas Karr
Ngokuzenzakalelayo, iSalesforce Marketing Cloud (I-SFMC) ayihlanganisiwe ne-Google Analytics ukuze ifakwe Okuguquguqukayo kochungechunge lwemibuzo yokulandelela i-UTM kusixhumanisi ngasinye. Amadokhumenti ekuhlanganisweni kwe-Google Analytics ngokuvamile akhomba lapho IGoogle Analytics 360 ukuhlanganiswa... ungase ufune ukubheka lokhu uma ngempela ufuna ukuyisa izibalo zakho ezingeni elilandelayo njengoba ikuvumela ukuthi uxhume ukusebenzelana kwesayithi lekhasimende kusuka ku-Analytics 360 uye emibikweni yakho Yefu Lokumaketha.
Ukuze uthole ukuhlanganiswa okuyisisekelo Kokulandelela Umkhankaso we-Google Analytics, noma kunjalo, kulula ukufaka ngokuzenzakalelayo ipharamitha yakho ngayinye ye-UTM kuso sonke isixhumanisi esiphumayo ku-imeyili ye-Salesforce Marketing Cloud. Ngokuyisisekelo kunezici ezi-3:
Imingcele yokulandelela isixhumanisi se-akhawunti yonke ekusethweni kwe-akhawunti.
Amapharamitha Esixhumanisi Engeziwe Kumakhi We-imeyili ongakwazi ukuwalungiselela ngokuzithandela amapharamitha e-UTM.
Izixhumanisi Zamathrekhi zinikwe amandla kwiwizadi ethi Thumela I-imeyili.
Ukulandelelwa kwesixhumanisi se-Google Analytics ku-SFMC Business Unit Level
Ngizama ukugwema izinyathelo ezengeziwe ngesikhathi sokuthumela ngoba uma usufe umkhankaso, akukho ukujikela emuva. Ukuthumela umkhankaso we-imeyili bese ukhumbula ukuthi awuzange unikwe amandla ukulandelela umkhankaso kubuhlungu kakhulu, ngakho ngikhuthaza amapharamitha ayisisekelo e-UTM ukuthi alandelelwe ngokuzenzakalelayo kuleveli ye-akhawunti ngaphakathi kwe-SFMC.
Ukwenza lokhu, umlawuli we-akhawunti yakho uzozulazula aye Ekumiseni I-akhawunti yakho (inketho phezulu kwesokudla ngaphansi kwegama lakho lomsebenzisi):
Zulalela ku Isethaphu > Ukuphatha > Ukuphathwa Kwedatha > Ukuphathwa Kwepharamitha
Lokho kuvula ikhasi lezilungiselelo lapho ungalungiselela khona eyakho Isixhumi se-Web Analytics
Ngokuzenzakalelayo, i amapharamitha asethiwe kanje ekulandeleleni kwangaphakathi kwemikhankaso:
Isincomo sami ukuthi lokhu kubuyekezelwe ku:
QAPHELA: Sibonile lapho iyunithi yezinhlamvu yokushintsha ihluka khona kuwo wonke amaklayenti. Ungase ufise ukuqinisekisa amayunithi ezinhlamvu akho ngosekelo lwe-Marketing Cloud. Futhi, kunjalo, kufanele uthumele kuhlu lwangempela lokuhlola futhi uqinisekise ukuthi amakhodi e-UTM afakiwe.
Lokhu kwengeza okulandelayo:
utm_ umkhankaso isethelwe I-SFMC
utm_medium isethelwe imeyili
utm_source isethwe ngokuguquguqukayo kweyakho Igama lohlu
okuqukethwe isethwe ngokuguquguqukayo kweyakho Igama le-imeyili
utm_term is ngokuzithandela setha usebenzisa isibaluli se-imeyili esengeziwe esivela kumakhi wakho we-imeyili
Londoloza izilungiselelo zakho futhi ipharamitha izongezwa kuleyo akhawunti.
Ibuyekeza isibaluli sakho se-imeyili esengeziwe
Ngifihle idatha yeleveli ye-akhawunti kulesi sithombe-skrini, kodwa uyabona ukuthi manje sengingakwazi ukulungisa ipharamitha yesibaluli se-imeyili eyengeziwe ukuze ngimise utm_term inketho. Ngingahle ngifune ukusebenzisa lokhu ngezigaba eziyisisekelo ze-imeyili yami njenge-upsell, ukuthengisa okuphambene, ukugcinwa, izindaba, indlela yokwenza, njll.
Landelela Izixhumanisi Uma Uthumela nge-SFMC
Ngephutha, Ukuchofoza kwethrekhi inikwe amandla uma ithunyelwa nge-SFMC futhi ngingancoma ukuthi ungalokothi ukhubaze leyo nketho. Uma wenza kanjalo, akususi nje ukulandela kwakho kwe-UTM, kususa konke ukulandelela umkhankaso kwangaphakathi kwalokho kuthunyelwa ngaphakathi kwe-Marketing Cloud.
Yilokho-ke… kusukela manje kuqhubeke noma nini lapho ama-imeyili ethunyelwa ngaleyo akhawunti, kufanele I-Google Analytics UTM Tracking querystring ingezwe ukuze ukwazi ukubona imiphumela yokumaketha kwakho kwe-imeyili ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Usizo Lwefu Lezokumaketha le-Salesforce: Phatha Amapharamitha
Uma inkampani yakho idinga ukuqaliswa noma usizo lokuhlanganiswa ne-Salesforce Marketing Cloud (noma ezinye izinsizakalo ezihlobene ne-Salesforce), sicela ucele usizo ngokusebenzisa Highbridge. Ukudalula: Nginguzakwethu ku Highbridge.
Tags: __I-AdditionalEmailAttribute1I-imeyiliName_I-google analyticsindlelaI-LinkNameListNameukuphathwa kwepharamithasaleforce marketing cloudsfmcukulandelela izixhumanisiamapharamitha we-utmutm_ umkhankasookuqukethweutm_mediumutm_sourceutm_termisixhumi sewebhu sokuhlaziya
I-SlayerAI: Ukunquma Amagama Amaningi Ahlukahlukene Okudingayo Ukuze Uwine